वैज्ञानिक भन्छन्ः रोबटले पनि बच्चा जन्माउन सक्छ - Dainik Online Dainik Online
प्रकाशित मिति : १६ मंसिर २०७८, बिहिबार १० : १९
न्युयोर्क। वैज्ञानिकहरुले पहिलो जीवित रोबटले बच्चा जन्माउन सक्ने बताएका छन्।
अमेरिकी वैज्ञानिकहरुले नै सृजना गरेको पहिलो जीवित रोबट ‘सेनोबोट्स’ले बच्चा उत्पादन गर्न सक्ने उनीहरुले दाबी गरेका हुन्।
तर, रोबटको उत्पादन बोटविरुवा र अन्य जनाबरहरुमा भन्दा फरक हुने उनीहरुको भनाई छ। हालै गरिएको एक अध्ययनमा उनीहरुले यस्तो निस्कर्ष निकालेका हुन्।
अफ्रिकाको एउटा भ्यागुतो सेनोपोस लेभिसबाट सृजना गरिएका सेनोबोट्स एक मिलिमिटरभन्दा पनि न्यून फराकिला छन्।
प्रयोगशालामा उनीहरु हिँडडुल गर्न र समूहमा काम गर्न सक्ने भएपछि ससाना बल्बहरुलाई सन् २०२० मा सार्वजनिक गरिएको थियो।
युनिभर्सिटी अफ भर्माउन्ट, टफ्टस युनिभर्सिटी र हावार्ड युनिभर्सिटीको वायस इन्स्टिच्युट फर बायोलोजिकल्लीका इन्जिनियरहरुले विरुवा वा जनाबरहरुमा भन्दा विल्कुलै फरक तरिकाको प्रजनन् विकास गरेको दाबी गरेका छन्।
‘अ‌ाविश्कारबाट हामी अचम्म परेका छौं’ टफ्टस युनिभर्सिटीका प्राध्यापक तथा निर्देशक मिसेल लेभिन भन्छन्।
‘भ्यागुताहरुले सामान्य तरिकाले नै बच्चा जन्माउछन्। तर, उनीहरुको बाँकी भ्रुणबाट कोषहरुलाई हटाइदिने तथा नयाँ वातावरणमा छोडिदिने हो भने उनीहरु नयाँ ढ‌ंगले हिँडडुल गर्ने मात्र होइन, नयँ तरिकाले प्रजनन् समेत गर्छन्’ उनी भन्छन्।
रोबोट कि जीव?
स्टिम सेल अनिश्चत कोष हुन् जसको विभिन्न प्रकारको कोषमा विकसित हुने क्षमता रहन्छ। सेनोबोट्स बनाउन अनुसन्धानकर्ताहरुले भ्यागुतोको भ्रुणको जीवित स्टिम कोषलाई नष्ट गरेर अन्डा निश्काशनका लागि छोडिदिएका थिए। जीनलाई कुनै परिवर्तन गरिएको थिएन।
‘अधिकांशले यो सोच्छन् कि रोबट धातु र माटोबाट बनेका हुन्। रोबट केबाट बन्छ भन्ने विषय गौण हो। बरु यसले के गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो।’ प्राध्यापक तथा युनिभर्सिटी अफ भर्मन्टका विज्ञ जोश बोनगार्ड भन्छन्,‘बाहिरी रुपमा यो रोबट नै हो तर वास्तविक रुपमा भन्नुपर्दा भ्यागुतोको कोषाबाट वंशानुगत रुपमा बनाइएको जीव हो।’
करिव तीन हजार कोषबाट बनाइएका सुरुमा गोलाकार देखिएका सेनोबोट्स नक्कल गर्न सकिने बोनगार्ड बताउँछन्। तर, यो दुर्लभ र विशेष परिस्थितमा मात्र हुने उनको भनाई छ।
सेनोबोट्सलाई अझै प्रभावकारी बनाउन कृत्रिम बौद्धिकताको सहयोगमा अनुसन्धानकर्ताहरुले अर्बै शरीरका आकारलाई परीक्षण गरेका थिए। परीक्षाण गर्न सुपरकम्प्युटरलाई सी अ‍ाकारमा ल्याइएको थियो। त्यो अ‍ाकार सन् १९८० को भिडियो गेम प्याक मेनसँग मिल्दथ्यो।
यो अध्ययन वैज्ञानिक जर्नल पीएनएएसमा प्रकाशित छ।
भारतमा १ दिनमा ३ लाख ६ हजार नयाँ सङ्क्रमित
नयाँ दिल्ली । भारतमा पछिल्लो एक दिनमा तीन लाखभन्दा बढी मानिस कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन्
नेकपा (माओवादी केन्द)का नेता वर्षमान पुनले पार्टी महासचिवमा आफनो दाबी स्वभाविक भएको बताउनुभएको छ। चीनमा
रुस-युक्रेन संकट: नेटोले पूर्वी यूरोपमा युद्ध पोत र लडाकु विमान पठायो
काबुल । अत्यधिक हिमपातका कारण अफगानिस्तानमा कम्तीमा ४२ जनाको मृत्यु भएको छ। हिमपातमै परी अरु
भीम रावलको प्रश्नः काठमाडौंमा सिटामोलको अभाव छ, यसमा पनि नाफाखोरीको तारतम्य छ?
जर्मनीको लेक्चर हलमा बन्दुकधारीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा थुप्रै घाइते
बर्लिन। जर्मनीको दक्षिणपश्चिमी शहर हाइडेलबर्गको लेक्चर हलमा बन्दुकधारीले गोली चलाउँदा धेरै व्यक्तिहरू घाइते भएको जनाइएको
माओवादी केन्द्रका नेता पुन ४ महिनापछि स्वदेश फिर्ता
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता वर्षमान पुन स्वास्थ्योपचार गरी स्वदेश फर्कनुभएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उहाँलाई
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मूल्य वृद्धिको विरोधमा प्रदर्शन गरेको छ।
ओमिक्रोनपछि कोरोना समाप्त हुन्छ भन्नु खतरनाक: डब्लुएचओ